न्याम्स प्रवेश परीक्षा शनिबार, आधारविनै रोकियो, आधारविनै तोकियो मिति, भत्काइयो प्राज्ञिक मर्यादा – Health Post Nepal
न्याम्स प्रवेश परीक्षा शनिबार, आधारविनै रोकियो, आधारविनै तोकियो मिति, भत्काइयो प्राज्ञिक मर्यादा
२०७६ कार्तिक ५ गते १८:३९
उपप्रधान एव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको लिखि निर्देशनमा स्थगित भएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को एमडी\_एमएस\_एमडिएस तहको प्रवेश परीक्षा ९ कात्तिकको लागि तय गरिएको छ । शैक्षिक क्यालेण्टर अनुसार निर्धारित परीक्षण स्थगित गरेर पछिल्लोपटक समेत तर्कसंगत आधार विपरीत परीक्षा निर्धारण गरिएको छ ।
न्याम्सले विगतका वर्षहरुमा सुचना निकालेर परिक्षार्थीलाई प्रवेश पत्र दिएको पहिलो शनिबार परीक्षा लिने गरेको थियो । १ गते न्याम्सले मन्त्री यादवको ठासो निर्देशन आएको भन्दै १५ दिनको ग्याप लिएर मात्र परीक्षा लिन पाउने भन्दै परीक्षा रद्द गरेको थियो । तर पहिलोपटक परीक्षा रोक्न देखाएको कारणलाई नै वेवास्ता गरेर गैरप्राज्ञिक विधिबाट परीक्षा तोकिएको छ । पहिला– पहिला वीर अस्पताल भित्रका उपकुलपति हुने गरेका थिए र हाल बाहिरबाट आएका न्याम्सले गर्दै आएको कामहरुलाई मेट्न खोजको र परीक्षा राजनैतिकमा हस्तक्षेप गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यस्तो निर्णयहरु सम्बन्धित परीक्षा डीनको कार्यलयलाई सल्लाह गरेर निर्णय भएदेखि मन्त्रालय वा आफू पनि विवाद पर्दैन थियौ डिन दाहाल भन्छन्,‘ परीक्षाको जस्तो शैक्षिक विषयमा राजनैतिक र प्रशासनियक हस्तक्षेप उपयुक्त हुँदैन ।’ डीनको कार्यलयले स्थगित भएको परीक्षालाई २३ गते लिने तयारीमा गर्दै आएकोमा उपकुलपति कार्यलयले तिहारको मध्य समयमा नै परीक्षा तोकिदिनुले परीक्षार्थीलाई असर पर्ने डा. दाहालको भनाई छ ।
सोमबार उपकुपति कार्यलयले गरि ९ गतेको लागि परीक्षा लिने एक सुचना जारी गरेको छ । तर, मन्त्रालयले १५ दिनको ग्याप राखेर सुचना निकाल्न आदेश दिँदा उपकुलपति कार्यलय भने ४ दिनको ग्यापमा परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो । जुनसुकै लिखित परीक्षाको सुचना केन्द वा डिन कार्यलय निकाने प्राबधान रहेको छ । उपकुलपति कार्यलयले निकालेको सुचनामा न त चलानि नम्बर छ न हस्ताक्षर नै गरिएको छ । र्दुगमबाट आएका परीक्षार्थी १५ दिनको ग्याप लिएर मात्रै परीक्षा लिने न्याम्सले सुचना निकालेपछि सबै तिहार मान्नको लागि घर फर्किएको अवस्था छ । तिहारको मध्येमा परीक्षा तोकिदा परीक्षार्थीलाई समस्या पर्ने देखिन्छ ।
यसबर्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमडीरएमडीएमएसतर्फ ११५ र डिएमरएमसीएचतर्फ २१ सिट निर्धारण गरेको छ । जसमा एमडीरएमडीएमएसतर्फ एनेस्थेसियामा १५, डर्माटोलोजीमा २, इएनटीमा ४, इन्टरनल मेडिसिनमा १५, गाइनोकोलोजीमा १४, अप्थोमोलोजीमा १७, अर्थोपेडिक्समा ८ सिट दिएको छ । त्यसैगरी पेड्रियाटिक्समा ११, साइक्याट्रिकमा १, प्थाथोलोजीमा ३, एमडिजिपीमा ३, रेडियोलोजीमा ६, रेडिएसन अंकोलोजीमा २ र जनरल सर्जरीमा १४ सिट निर्धारण गरेको छ । डिएममा कार्डोलोजीमा ३, गास्ट्रो इन्ट्रोलोजीमा ३, हेपोटोलोजीमा २, मेडिकल अंकोलोजीमा २, नेफ्रोलोजीमा २ सिट निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी, एमसिएचतर्फ न्युरो सर्जरीमा २, प्लास्टिक सर्जरीमा २, थोरासिक एण्ड भास्कुलर सर्जरीमा २, युरोलोजी २ सर्जिकल गाइनोकोलोजीमा १ सिट तोकेको छ । यस वर्ष एमडीएसतर्फ विभिन्न विद्याका लागि ७ वटा सिट निर्धारण गरेको छ । १ हजार ८ सयले हाराहारीमा परीक्षार्थीले आवेदन दिएका छन् ।
प्रत्येक वर्षको न्याम्सले शैक्षिक क्यालेन्डर निकाल्ने गरेको छ । वर्षभरिको क्यालेन्डर अनुसार काम नगरेको खण्डमा एक ले अर्को विषयलाई परीक्षालाई असर पर्न सक्छ । त्यहि अनुसार एमडी\_एमएस\_एमडिएस को परीक्षा असार मा लिएर भदौँ बाट नै कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर लक्ष्य न्याम्सले राखेको थियो । तर बिचमा भर्नाको पक्रियामा पुरानो सिनेटबाट नै निर्णय भएको कुरा नगर्नु भनेर मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि त्यसको कार्योन्वयन गर्नलाई न्याम्सलाई समय लागेको थियो ।
डीन भन्छन्, ‘राजनैतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप भयो’
उपकुलपति कार्यलयले आफ्नो एकल निर्णयले परीक्षाको समय तोकिदिँदा डीन कार्यलय अर्को प्रेसरमा परेको न्याम्सका डिन प्रा.डा पियुष दाहाल बताउँछन् । यस्तो निर्णयहरु सम्बन्धित परीक्षा डीनको कार्यलयलाई सल्लाह गरेर निर्णय भएदेखि मन्त्रालय वा आफू पनि विवाद पर्दैन थियौ डिन दाहाल भन्छन्,‘ परीक्षाको जस्तो शैक्षिक विषयमा राजनैतिक र प्रशासनियक हस्तक्षेप उपयुक्त हुँदैन ।’ डीनको कार्यलयले स्थगित भएको परीक्षालाई २३ गते लिने तयारीमा गर्दै आएकोमा उपकुलपति कार्यलयले तिहारको मध्य समयमा नै परीक्षा तोकिदिनुले परीक्षार्थीलाई असर पर्ने डा. दाहालको भनाई छ ।
कसरी न्याम्सको शैक्षिक क्यालेन्डर बाहिर गएको थियो एमड\_एमएस\_एमडिएसको परीक्षा ?
प्रत्येक वर्षको न्याम्सले शैक्षिक क्यालेन्डर निकाल्ने गरेको छ । वर्षभरिको क्यालेन्डर अनुसार काम नगरेको खण्डमा एक ले अर्को विषयलाई परीक्षालाई असर पर्न सक्छ । त्यहि अनुसार एमडी\_एमएस\_एमडिएस को परीक्षा असार मा लिएर भदौँ बाट नै कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर लक्ष्य न्याम्सले राखेको थियो । तर बिचमा भर्नाको पक्रियामा पुरानो सिनेटबाट नै निर्णय भएको कुरा नगर्नु भनेर मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि त्यसको कार्योन्वयन गर्नलाई न्याम्सलाई समय लागेको थियो । न्याम्सले २८ गते सुचना जारी गर्नुभन्दा मन्त्रालय संग छलफल भएको थियो, परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भने जानकारी दिएपछि न्याम्सले १८ सय हाराहरीमा रहेका परीक्षार्थीलाई एसएमएस पठाएको डीन दाहाल बताउँछन् ।
सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर परीक्षाको तयारीमा रहेका थियौँ । १ गते विहान मन्त्रालयबाट वीर अस्पतालका निर्देशक डा .केदार सेञ्चुरीले चिट्टी बोकेर आउनु भयो । यसमा परीक्षा स्थगित गर्नु भनेर सहकुलपतिको निर्देशन रहेको थियो,‘ दाहाल भन्छन्,‘ परिक्षा समिति र प्राज्ञिक सदस्यबीच छलफल हुँदा निर्देशनलाई मान्यै पर्छ भनेर परीक्षालाई स्थगित गरियो । नयाँ तयारीको लागि १५ दिन ग्याप पछि मात्र परीक्षा लिने भनेर सुचना जारी गरेका थियौँ ।’
यसबीचमा न्याम्सका उपकुलपतिबीच टेलिफोन कुराकानीमा छलफल गरेर मात्र परीक्षाको मिति तोक्नुपर्ने भनेर बताइएको दाहाल बताउँछन् । माथिल्लो निकायले नै यस्तो निर्णय गरेपछि हामी अर्को प्रेसरमा परेको र परीक्षको सम्मेवदनशीलतालाई मध्यनजरमा राख्दै त्यसको तयारीमा मंगलबार बाट तयारीमा जुटेको डा. दाहालले जानकाकरी दिए ।
प्रा.डा पियुष दाहाल
One thought on “न्याम्स प्रवेश परीक्षा शनिबार, आधारविनै रोकियो, आधारविनै तोकियो मिति, भत्काइयो प्राज्ञिक मर्यादा”
Mismanagement. Dean is responsible.